मैले ब्लग लेख्छु भन्दा साथीहरुले कति पैसा कमाउँछस र, किन लेख्ने भन्छन्-प्रकृति खड्का - MeroReport
मैले ब्लग लेख्छु भन्दा साथीहरुले कति पैसा कमाउँछस र, किन लेख्ने भन्छन्-प्रकृति खड्का
ट्विटरमा रहेको उनको बायोमा लेखिएको छ '-फोटोग्राफी, साहित्य, संगीत, चित्रकला, उपन्यास र प्रेमसंग प्रेम भएको मान्छे; डाक्टरी पढ्दैछु। ' ट्विटरबाटै आफ्नो स्वभाव समेत झल्काउँदै उनी भन्छिन्-'*पुरानो नेपालको नेपाली* *No DM*' उनी अर्थात प्रकृति खड्का, सामाजिक संजालहरु ट्विटर र जी+ मा निकै सक्रिय छिन भने ब्लगिङमा पनि उनको लगाव रहेको उनको ब्लग हेर्दा प्रष्ट देख्न सकिन्छ । फेसबुकमा समेत रहेकी उनले आफ्नो फेसबुक आईडी भने हामीसंग खुलाउन चाहिनन् । आफ्नो बारेमा अलिकति बताईदिनुस् न भन्दा उनले यत्ति भनिन्- 'म प्रकृति खड्का । बिराटनगरमा मेडिकल पढिराछु तेस्रो वर्षमा । खास घर भैरहवा हो तर हाल बसाई काठमाडौंमा छ ।' मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा हामीले यसपाली उनै प्रकृति खड्कालाई प्रस्तुत गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उनीसंगको कुराकानी :
प्रकृति खडकालाई अरुले कसरी चिन्ने?
अहिले म चिकित्साशास्त्रकी विद्यार्थी हुँ । पहिचान बनाउन सकेको छैन ।
मलाई कसैले ब्लगर भनेर चिने म धेरै खुशी नै हुन्थेँ ।
तपाँइको ब्लग http://mirrorandecho.blogspot.com/ मात्रै कि यस बाहेक अरु पनि छन्?
यही मात्रै हो ।
म आफ्नो ब्लगमा आफ्नो जीवनमा, आफु वरपर भएको घटनाहरुलाई समेटेर लेख्नेगर्छु । आफुले गरेको चित्रकला, मैले पाएको पत्र, सबथोक पोष्ट गर्छु । प्राय: लेख्ने बेलामा चाहीँ सामाजिक वस्तुलाई नै लिएर लेख लेख्छु ।
सन् २०१२ मा स्कुल पास भएर भारतको हिसारबाट नेपाल आएँ । स्कुल धेरै कडा थियो र इन्टरनेटको सुविधा थिएन । त्यती बेला अर्कै ब्लग चलाउँथे, जुन केही कारणले गर्दा पछि रद्द गरेँ र फेरी अहिले यो http://mirrorandecho.blogspot.com/ ब्लग चलाउन थालेँ ।
लेख्ने मेरो रुची भएको हुनाले, घर आउनासाथ खाली समयमा लेख्न थालेँ । मनमा जे आउँथ्यो त्यही लेख्ने गरेँ । बिशेष गरी समाजमा भएको कुराहरु धेरै लेख्थेँ । मेरो पहिलो लेख चाँही स्कुले बालबालिकाहरुले कलम भन्दा धेरै चुरोट समाएको बिषयमा थियो ।
ब्लग म आफ्नो निम्ती लेख्छु । मेरो जीवनमा भएको वास्तविक घटनाहरु अरुले पढे र त्यस्का बारेमा मसँग गफ गरे खुशी नै लाग्छ । साथै केहि मनमा खेलिरहेका कुराहरु ब्लगमा लेखेपछि आफुलाई हल्का महशुस हुन्छ ।
मानिसहरु ब्लगिङ गर्न रहर त धेरै नै गर्छन, तर निरन्तर ब्लग गरिरहन या ब्लगलाइ समय दिन त गाह्रो छनि है !
आफ्नो निम्ती ब्लग लेखेको छु । निरन्तरता दिन जरुरी सम्झिन्न । समय पनि हुन्न । पेशा नै त्यही, खेती नि त्यही भए अर्कै कुरा तर त्यो त म मेरो खाली समयमा गर्छु । त्यस्को लागि बेग्लै समय निकाल्ने गरेको चाहीँ छैन अहिलेसम्म ।
उपन्यास पढ्न अत्ति मन पर्छ तर समय छैन । अनि चित्रकला पनि मेरो रुचिको बिषय हो ।
मोफसलबाट ब्लगिङ गर्न कत्तिको सजिलो छ? तपाँई पनि अहिले अध्ययनका लागि बिराटनगरमा हुनुहुन्छ ।
मलाई त खासै फरक लाग्दैन । ब्लग त जता र जहाँबाट पनि लेख्ने नै हो । अरुको लागि कस्तो छ भन्न सक्दिन ।
तपाई सोसल मिडियामा पनि हुनुहुन्छ । नेपालमा सोसल मिडियाको प्रयोग कस्तो भइरहेको पाउनुभएको छ?
खै, म त राम्रै मात्रै देख्छु । जे होस समाचार हेर्न वा सुन्न पर्दैन । अहिले वर्ल्डकप चल्दैछ, अस्ती टेरिया भन्ने नानीले डान्स कम्पिटिसन जितिन् यी सब थोक टिभी नहेरी उत्तिखेरै थाहा हुन्छ, ट्विटर या फेसबुक मार्फत । ब्लगहरुले पनि राम्रो ज्ञान दिन्छन, जीवन बारे, यताउति देशविदेशका घटना तथा विकास बारे सुचना आदानप्रदान गर्न राम्रै प्रयोग भएको देख्छु ।
लिकं भेटे पढ्छु । gaffadi, Nepaliketi, lexlimbu चाँही नियमित पढ्छु ।
कस्तो खालको ब्लग हो त्यसमा भर पर्छ । आचारहिनता त कतै पनि राम्रो हुदैंन नि ! कसैलाई अपमान गरेर या झुठो कुरो लेख्नु हुँदैन ।
पालना गरेकै देख्छु । ब्यंग्यात्मक ढंगले हँसाउन त जे लेखे पनि ठिकै हो ।
मैले ब्लग लेख्छु भन्दा साथीभाईहरुले कती पैसा कमाउँछस र? किन लेख्छेस र? भन्छन । मलाई हाँसो लाग्छ ।
सबैमा भिन्नता छ । फेसबुकमा पारिवारि सदस्य र मित्र धेरै छन्, ट्विटरमा मन मिल्ने मान्छेहरु छन्, धेरै बोल्न रुचाउनेहरुले ट्विटिने गर्छन झै मलाइ लाग्छ । ब्लग चाँही लेख्न, पढ्न रुचाउनेहरुलाई हो । फेरी ब्लग त फेशन हो, खाना पकाउने देखी घुमघाम सबको ब्लग हुन्छ । मलाई लाग्छ आफुलाई जे दुनियासँग बाँड्न मन छ भने ब्लग गरिन्छ ।
खासै थाहा छैन ।
अघि भने जस्तै ब्लग भनेको आफ्नो कुरो शेयर गर्ने माध्यम हो । अब फेशन, घुमघाम, पकवान सबै थोक हुन्छ । कुनलाई पत्रकारिता भनुम, कुनलाई के भनुम ! ब्लग-ब्लगमा भर पर्छ ।
धन्यवाद । अनि तपाईंको टीम लाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु ।
Comment by Dr. Surya B. Parajuli on July 10, 2014 at 2:24pm
Nice blog, keep it up. Beingamedical student, it is good for the future, I guess!!!
Comment by Udaya GM on June 26, 2014 at 2:11pm
Badhai chha Prakriti lai
Comment by Prakash Lamichhane on June 25, 2014 at 1:08pm
Comment by Amuna Chapagain on June 25, 2014 at 12:14pm